I-XNXX: Kungani sifuna ukuya ocansini ngaso sonke isikhathi phakathi nehlobo - I-Thuka RELAY
I-XNXX: Kungani sifuna ucansi futhi silale ngaso sonke isikhathi ehlobo?
Ubulili nobuhloboIMPILO YAMIISAYENSI
Ngabe uqaphele ukuthi i-libido yakho iphakeme kakhulu ehlobo? Kujwayelekile futhi sizokuchaza ukuthi kungani.
Ngokusho kocwaningo olwenziwe yi-YouGov France, ama-53% abantu baseFrance athi bafuna ukwenza ucansi kakhulu ehlobo. Futhi ucwaningo oluningi lukhombisa ukuthi abantu abahlala ezindaweni ezishisayo nezishisa kakhulu ocansini. Kepha kwenzeka kanjani ukuthi ungashazwa (ngaphandle kwama-puns amabi)? Kukhona izizathu eziningana zokwanda kwe-libido lapho amazinga okushisa enyuka. Futhi ilanga linokuthile ngakho. Ngempela, ukukhanya kwelanga kukhonjiswe kuhlotshaniswa nokwanda kwe-serotonin, i-neurotransmitter esemqoka emandleni wokuthola injabulo. Ngakho-ke kuvusa imizwa namandla.
IVitamin D enikezwe yilanga nayo idlala indima ebalulekile kulokhu kwanda kwe-libido. Izinga lamavithamini D amaningi enyuka emzimbeni, uma ukhathele kancane, kuncipha ikhanda lakho, kulala kangcono. Futhi njengoba lezi zinkinga zezempilo zithuthuka, yiba nesimo sokuzithemba nokuzethemba, okusiza ukwandisa imizwa yokuvuselela inqubo. Lokhu yincazelo yesayensi. Kepha kukhona nezinye izinto ezimbalwa okufanele uzicabangele. Uma ehlobo, isifiso sobulili sikhuphuka, futhi yingoba sizungezwe izinto ezivusa inkanuko yethu. Ngokunyuka kwezinga lokushisa, amadoda nabesifazane bayakhumuza, bekhombisa izingalo zabo, imilenze yabo futhi, ogwini, izisu zabo, izinqe namathumbu abo.
Imizimba ivezwa kakhulu futhi lokhu kunokuthile okuvusa ama-hormone ethu, kukhuphule injabulo yethu. Ukungasho ukuthi ukushuka kunethonya elihle kuma-receptors ethu. Futhi uma singeza kulokho ukuthi ehlobo, siphumule kakhulu kunokuhlala unyaka wonke, lokho kuyasiza. Ehlobo, sisebenza kancane kakhulu, sithatha amaholide, siba nobumnandi ngokwasemini ngamavila ebhishi noma emaphandleni, izoso zokudla nabangane, ama-cocktails e-ithala. Sinesikhathi esengeziwe futhi sinenkululeko ethe xaxa, ukuze sicindezele okuncane ngakho-ke sivulekele kakhulu ebangeni lokuya ocansini. Zonke lezi zinto zisenza sifune ukuzitika kakhulu njalo enjabulweni yenyama futhi sizame nemidlalo engemihle enabalingani bakhe.
umthombo: https: //trendy.letudiant.fr/le-conseil-sexy-du-lundi-pourquoi-a-t-on-plus-envie-de-sexe-en-ete-a4995.html
Amapulatifomu aphezulu okuhweba ukuthenga nokuthengisa ama-cryptocurrencies